Foundation မပါဘဲ မျက်နှာလေးကို ပါးပါးကြည်ကြည်လေးဖြစ်စေဖို့ | CosmeticMyanmar
Home » Article » Foundation မပါဘဲ မျက်နှာလေးကို ပါးပါးကြည်ကြည်လေးဖြစ်စေဖို့
အချစ်တို့ရေ အလှအပတွေဆို အရူးအမူးကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်းရှိသလို အသားရေကိုဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ မိတ်ကပ်ဆိုတာ foundation ဆိုတာတောင် သေချာမသိတဲ့ ကောင်မလေးတွေလည်း တစ်ပုံကြီးပါ။ အဲ့လိုမသိလို့ ရှက်စရာလည်းမလိုသလို စိတ်ညစ်စရာလည်းမရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ချို့ကစိတ်မဝင်စားကြသလို တစ်ချို့ကလည်း မသိကြတာပေါ့။ ဒါကသိပ်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ပေမယ့် အပြင်တွေသွားတဲ့အခါကျ bare face နဲ့အပြင်ထွက်တာမျိုးတွေက အဆင်လည်းမပြေနိုင်သလို အသားရေကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ မင်မင်က အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ပါးပါးလေးနဲ့လှနေမယ့် ပြင်ဆင်ပုံလေးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁. sunscreen ကိုအမြဲသုံးပေးပါ။
Sunscreen ဆိုတာကတော့ အရေပြားကိုနေရောင်နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့အောင် တစ်လွှာကာပေးထားတာပါ။ တစ်ချို့ sunscreen တွေက make up သားပါးပါးလေးပါဝင်လို့ အပေါ်က ပေါင်ဒါလေးပုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့တင် အဆင်ပြေနေပါပြီ။ မိတ်ကပ်သားမပါလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ နေရောင်နဲ့ထိတွေ့မှုများတဲ့နေရာလေးတွေ ဥပမာ-ပါးနေရာလေးတွေ, နဖူးလေးတွေကိုပိုလိမ်းပေးပါ။ ပါးပါးလေးပဲသုံးပေးရမှာနော်။ ပြီးတော့ sunscreen ကို SPF 50++ ပါတာလောက်ကိုရွေးပေးပါ။
၂. BB, CC cream လေးတွေရွေးပေးပါ။
ရှုပ်ကုန်ကြပြီလား? လိုရင်းကိုပြောရရင် BB cream က မိတ်ကပ်သားပါးပါးလေးပါတယ်။ CC cream တော့ ပြောင်ပြောင်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်စေတယ်။ မိတ်ကပ်သားသိပ်မပါဘူးပေါ့နော်။ အဲ့တော့ အဲ့ဒါလေးတွေက လက်လေးနဲ့ကိုလိမ်းလို့ရတဲ့အမျိုးအစားတွေပါ။ ဖော့တုံးတွေ, brush တွေ နဲ့လိမ်းတတ်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ လက်နဲ့ဆိုတော့ မသန့်တာတွေဘာတွေရှိမှာဆိုတော့ မလိမ်းခင် လက်ကိုသေချာလေးဆေးပေးပါနော်။
ပေါင်ဒါကတော့ အမှုန့်လေးတွေပဲသုံးသုံး, pressed powder လေးတွေပဲလိမ်းလိမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုဖုံဖုံကြီးလိမ်းစရာမလိုပါဘူးနော်။ ချွေးထွက်များတဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲ သေချာလေးလိမ်းပေးပါ။
ကဲဒီ ၃ မျိုးလေးကို စနစ်တကျလေးလိမ်းခြယ်ပေးပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ပါးပါးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးကိုကိုယ်တိုင်လိမ်းခြယ်နိုင်ပါပြီနော်။
အသားရေကို သိသိသာသာကြည်လာစေမယ့် scrub ယိုစုံဘူးလေးတွေ
ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Cetaphil Moisturizing Cream